စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကွက်လပ်နေရာကို ဖြည့်မယ့်သူက ဟာရီကိန်းလား
Cristiano Ronaldo နေရာကို အစားဝင်မယ့်သူက Harry Kane ဖြစ်မလား
28 Jul 2018 . 5:35 PM
အသင်းရဲ့ အဓိက တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရီးယဲလ် Real Madrid အသင်းဟာ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးနဲ့ ပြန်အစားထိုးဖို့ အပူတပြင်းကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ အသိပါပဲ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက မန်ယူအသင်းကနေ ရီးယဲလ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း (၄၃၈)ပွဲကစား၊ စုစုပေါင်း ဂိုး(၄၅၀)အထိ သွင်းခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ မရှိမဖြစ်ကစားသမားတစ်ဦးသာမက သူ့နေရာမှာ နောက်ထပ်တစ်ဦးနဲ့ အစားထိုးဖို့ ခက်ခဲတဲ့သူတစ်ဦးဆိုတာကို သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းက တော်ရုံကစားသမားမျိုးကို ခေါ်ယူဖို့ လက်တွန့်နေပြီး စီရော်နယ်လ်ဒိုလို စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် တကယ့် ဒေါင်ဒေါင်မြည် ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူးကိုသာ ခေါ်ယူဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ PSG အသင်းက နေမာ Neymar ၊ ဘာပေ Mbappe တို့ကို ပစ်မှတ်ထားနေပေမယ့်လည်း နှစ်ယောက်စလုံးက PSG ကနေ ထွက်ဖို့အနေအထားမရှိလို့ အခု သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်က စပါးအသင်းရဲ့ အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူးဟာရီကိန်း Harry Kane ဆီ ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကလည်း ဟာရီကိန်းဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုမရှိတော့တဲ့ တိုက်စစ်ကွက်လပ်မှာ အကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့်သူအဖြစ် ယုံကြည်နေပြီး သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ စပိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ Marca က ရီးယဲလ်အသင်း ဘယ်လိုတိုက်စစ်မှူးကို ခေါ်ယူသင့်လဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေဆီ မဲဆန္ဒကောက်ခံခဲ့တော့ ဟာရီကိန်းကို အများဆုံး Vote ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုရှင်၊ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီ သွင်းဂိုးအများဆုံးရွှေဖိနပ်ပိုင်ရှင် စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဟာရီကိန်းကို ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေ အလိုရှိနေတာက သိပ်တော့လည်း မဆန်းပါဘူး။ Marca ရဲ့ စစ်တမ်းအရ Vote ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်(၂)သိန်းမှာ (၂၆)ရာခိုင်နှုန်းက ဟာရီကိန်းကို မဲပေးခဲ့ပြီး ကာဗာနီ Cavani နဲ့ အီကာဒီ Icardi တို့က (၁၄)ရာခိုင်နှုန်းစီရခဲ့ကြတယ်လို့ သိရတယ်။
နေမာ-ရီးယဲလ်၊ ဘာပေ-ရီးယဲလ် တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင်တွေ အဆုံးသတ်ချိန်မှာ အခုတော့ ဟာရီကိန်း-ရီးယဲလ် ဇာတ်လမ်းက ပြန်အသက်ဝင်လာပါပြီ။ ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့နေရာမှာ အစားဝင်မယ့်သူက ဟာရီကိန်းဖြစ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Premier League,Stadium Astro,Goal.com
Cristiano Ronaldo နရောကို အစားဝငျမယျ့သူက Harry Kane ဖွဈမလား
အသငျးရဲ့ အဓိက တိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ရီးယဲလျ Real Madrid အသငျးဟာ ထိပျတနျးတိုကျစဈမှူးတဈဦးနဲ့ ပွနျအစားထိုးဖို့ အပူတပွငျးကွိုးပမျးနတေယျဆိုတာ ပရိသတျတှေ အသိပါပဲ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက မနျယူအသငျးကနေ ရီးယဲလျကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး (၄၃၈)ပှဲကစား၊ စုစုပေါငျး ဂိုး(၄၅၀)အထိ သှငျးခဲ့ပွီး အသငျးရဲ့တိုကျစဈမှာ မရှိမဖွဈကစားသမားတဈဦးသာမက သူ့နရောမှာ နောကျထပျတဈဦးနဲ့ အစားထိုးဖို့ ခကျခဲတဲ့သူတဈဦးဆိုတာကို သကျသပွေသှားခဲ့ပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးက တျောရုံကစားသမားမြိုးကို ချေါယူဖို့ လကျတှနျ့နပွေီး စီရျောနယျလျဒိုလို စှမျးဆောငျနိုငျမယျ့ တကယျ့ ဒေါငျဒေါငျမွညျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တိုကျစဈမှူးကိုသာ ချေါယူဖို့ဆန်ဒရှိနတောပါ။
ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့ PSG အသငျးက နမော Neymar ၊ ဘာပေ Mbappe တို့ကို ပဈမှတျထားနပေမေယျ့လညျး နှဈယောကျစလုံးက PSG ကနေ ထှကျဖို့အနအေထားမရှိလို့ အခု သူတို့ရဲ့ပဈမှတျက စပါးအသငျးရဲ့ အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှူးဟာရီကိနျး Harry Kane ဆီ ရောကျလာပွနျပါပွီ။ ရီးယဲလျပရိသတျတှကေလညျး ဟာရီကိနျးဟာ စီရျောနယျလျဒိုမရှိတော့တဲ့ တိုကျစဈကှကျလပျမှာ အကောငျးဆုံးဖွညျ့တငျးပေးနိုငျမယျ့သူအဖွဈ ယုံကွညျနပွေီး သူ့ကိုချေါယူဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ကွတယျ။ စပိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ Marca က ရီးယဲလျအသငျး ဘယျလိုတိုကျစဈမှူးကို ချေါယူသငျ့လဲဆိုတာ ပရိသတျတှဆေီ မဲဆန်ဒကောကျခံခဲ့တော့ ဟာရီကိနျးကို အမြားဆုံး Vote ပေးခဲ့ကွပါတယျ။
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ရှဖေိနပျဆုရှငျ၊ ၂၀၁၅-၁၆၊ ၂၀၁၆-၁၇ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးရှဖေိနပျပိုငျရှငျ စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဟာရီကိနျးကို ရီးယဲလျပရိသတျတှေ အလိုရှိနတောက သိပျတော့လညျး မဆနျးပါဘူး။ Marca ရဲ့ စဈတမျးအရ Vote ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျ(၂)သိနျးမှာ (၂၆)ရာခိုငျနှုနျးက ဟာရီကိနျးကို မဲပေးခဲ့ပွီး ကာဗာနီ Cavani နဲ့ အီကာဒီ Icardi တို့က (၁၄)ရာခိုငျနှုနျးစီရခဲ့ကွတယျလို့ သိရတယျ။
နမော-ရီးယဲလျ၊ ဘာပေ-ရီးယဲလျ တို့ရဲ့ အပွောငျးအရှပေုံ့ပွငျတှေ အဆုံးသတျခြိနျမှာ အခုတော့ ဟာရီကိနျး-ရီးယဲလျ ဇာတျလမျးက ပွနျအသကျဝငျလာပါပွီ။ ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့သလို စီရျောနယျလျဒိုရဲ့နရောမှာ အစားဝငျမယျ့သူက ဟာရီကိနျးဖွဈမလား၊ ဒါမှမဟုတျ တခွားကစားသမား တဈဦးဖွဈမလားဆိုတာကတော့ . . .